Balse ka warrama hadduu midka wax ka reebi uu beeniyay (xaqa) kana jeedsaday (waa AbuuJahal iyo wixii la mid ahe).
Miyuusan ogayn in Eebe arko.
Saas ma aha ee hadduusan joogin waxaannu qaban Foodda.
Food beenaleey ah ghafna badan.
Ha u yeedho gargaarihiisa.
Waxaanu u yeedhi Malaa'ig darane.
Saas ma aha ee warkiisa ha maqlin Sujuudna una dhawow (Eebe).
Annagaa soo dajinnay Quraanka Habeenka LaylatulQadarka ah (sharafta leh).
Ma taqaanna LaylatulQadarka.
Waa Habeen ka khayr badan Kun Bilood (oo kale).
Waxaana soo daga Malaa'igta (kale) iyo Malaku Jibriil habecnkaas idanka Eebe dartiis iyo amarkiisa.
Waana Habeen nabadgalyo inta waagu ka haryi.